Wasiirka Amniga Soomaaliya oo maanta tagay Degmada Kaaraan oo lagu dilay Qof Shacab ah – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa saakay Askari ka tirsan Ciidamada Ammaanka Degmada Kaaraan la sheegay inuu Qof Shacab ah ku dilay Meel u dhow Xaruunta Degmada Kaaraan, waxaana dilkaasi ka dhashay Muran badan,kadib markii ehelka Qofka la dilay ay diideen in Meydka Goobta laga qaado.
Banaabax balaaran ayaa halkaasi ka dhacay, waxayna dadweyne fara badan oo halkaasi isugu soo baxay dhigeen dibadbax lagu gubay taayaro, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin Madax iyo Waxgarad ka tirsan Degmadaasi.
dadka banaabaxa dhigaayay ayaa ka cabanaayay rasaas si kas ah uu askari dowladda ka tirsan ugu furay Wadaad Waayeel ah oo isagu xiligaasi ka soo baxay Salaadii Subax oo ku soo dukaday Masjid ku yaala Agagaarka Xarunta Degmada Kaaraan.
Haddaba waxaa halkaasi tagay Wasiirka Amniga Xukumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow, isagoo amar ku siiyay Ciidamada Ammaanka in la soo qabto Askarigii dilay Qofka Shacabka ah si caddaaladda loo hor keeno.
Dhanka Wasiirka amniga ayaa dusha saartay inuu arintaasi wax ka qabanaayo, wuxuuna dadkii banaabaxa cabashada dhigaayay ku wargeliyay in isaga arinta laga war sugo, sidaas ayayna dadkii isku soo baxay u kala tageen,iyadoo askariga wax dilay xalay xaafadaasi laga hoyan waayay, wuxuuna furaayay xalay oo idil rasaas.
The post Wasiirka Amniga Soomaaliya oo maanta tagay Degmada Kaaraan oo lagu dilay Qof Shacab ah appeared first on Ilwareed Online.